China Photochromic pigment uv pigment loko miova vovoka amin'ny hazavan'ny masoandro Famokarana sy Factory | Topwell
pigmenta fluorescent ho an'ny ...
Fandoko mena mena avo lenta ...
Pigmenter fluorescent Uv ho an'ny ...
Thermochromic pigment ho an'ny ...
P pigchromic pigment uv pig ...
Photochromic pigment uv loko loko manova loko vovoka amin'ny tara-masoandro
Voninkazo Photochromic dia karazana microcapsules. Miaraka amin'ny vovoka tany am-boalohany nofonosina ao amin'ny microcapsules. Ireo fitaovana enti-manidina dia afaka manova loko amin'ny tara-masoandro. Ity karazana fitaovana ity dia manana ny mampiavaka ny loko marefo sy ny fahaizan'ny toetr'andro lava. Izy io dia azo ampiana mivantana mifanaraka amin'ny vokatra mifanaraka aminy.
Ny pigment Photochromic dia karazana microcapsules. Miaraka amin'ny vovoka tany am-boalohany nofonosina ao amin'ny microcapsules. Ireo fitaovana enti-manidina dia afaka manova loko amin'ny tara-masoandro. Ity karazana fitaovana ity dia manana ny mampiavaka ny loko marefo sy ny fahaizan'ny toetr'andro lava. Izy io dia azo ampiana mivantana mifanaraka amin'ny vokatra mifanaraka aminy. Izahay dia mamokatra ny haben'ny vovo-vovo eo amin'ny 3-5 um, ny fifantohana amin'ny ampahany mahomby dia avo kokoa noho ny vokatra hafa mitovy amin'ny tsena. Ny hafanan'ny fanoherana ny hafanana hatramin'ny 230 degre.
♥ Loko marevaka, marefo loko
♥ Fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny solvent
♥ Fanoherana ny andro lava
♥ adaptability matanjaka, mora miparitaka
♥ Manaraka ny fitsapana vokatra GB18408
1. Ink. Mety amin'ny karazana fanontam-pirinty rehetra, ao anatin'izany ny lamba, taratasy, sarimihetsika sentetika, Glass ...
2. Coating. Mety amin'ny karazana vokatra misarona ambonin'ny tany
3. Tsindrona. Azo ampiharina amin'ny karazana plastika pp, PVC, ABS, silipo vita amin'ny silika, toy izany
toy ny tsindrona fitaovana, famolavolana extrusion
Voninkazo Photochromic azo ampiasaina amin'ny loko, ranomainty, orinasa plastika. Ny ankabeazan'ny famolavolana ny vokatra dia ao anaty (tsy misy tontolon'ny tara-masoandro) tsy misy loko na hazavana ary any ivelany (tontolo iainana amin'ny masoandro) manana loko mamirapiratra.
Pigment Photochromic dia mora tohina kokoa amin'ny fitaoman'ireo solvents, PH, sy shear noho ny karazana pigment maro hafa. Marihina fa misy fahasamihafana eo amin'ny fanatanterahana ny loko isan-karazany ka samy tokony hosedraina tsara alohan'ny fampiharana ara-barotra.
Voninkazo Photochromic manana fitoniana tsara rehefa voatahiry lavitra ny hafanana sy ny hazavana. Fivarotana ambanin'ny 25 Deg.C. Aza avela hangatsiaka izany, satria hanimba ny capsules photochromic. Ny fihenan'ny longterm amin'ny fahazavana UV dia hampihena ny fahafahan'ny kapsily photochromic manova loko. Fiainana mandritra ny 12 volana dia azo antoka raha toa ka voatahiry ao anaty tontolo mangatsiaka sy maizina ny fitaovana. Ny fitehirizana lava mihoatra ny 12 volana dia tsy soso-kevitra.
Manaraka: Thermochromic pigment ho an'ny thermochromic Paint Thermochromic Ink Thermochromic Fabric